Akaremara Mitambo uye Iyo Impact
Posted on November 30, 2017 November 20, 2020 by csr 1687
Akaremara Mitambo USA
Vanhu vane hurema dzimwe nguva hunenge huine chivimbo chakaderera remara Mitambo inobatsira kuvandudza hupenyu hwevarwi vakakuvara, vechidiki, uye vakuru. Chiitiko ichi chinoshuvira kuti chipe hutungamiriri hwenyika nemikana kune chero akaremara kukudziridza hunhu hutatu hwakakosha. Chekutanga kuzvimirira, kana ukatora chikamu zvinokubatsira kuona kuti wakazvimiririra zvakadii. Yechipiri ndeyekuvimba, inobatsirawo kusimudza kusatya kwemutori wechikamu nekuti kusatya kwemunhu wese kunokwira kana ari mumakwikwi. Hunhu hwekupedzisira huri pachena hunova kusimba, chiitiko chemitambo saka kugwinya chinhu chikuru asi chinotenderera pazviri. Unogona kuwana zvese izvi kuburikidza nekutora chikamu kuburikidza nenharaunda mitambo, varaidzo, uye zvirongwa zvedzidzo. Vaive nechinangwa chimwe kubva mugore ra1967 chinova chekusimudzira hupenyu hwevakuru, vechidiki, uye varwi vakakuvara. Kana usingazive chinonzi kuremara munhu ane hurema hwekuona, akagurwa gumbo, musana kuipa, multiple sclerosis, musoro kuipa, cerebral palsy, mamwe mamiriro euromuscular uye orthopedic, autism uye humwe hurema hwepfungwa hunoenderana. Akaremara Sports USA inoshandira vechidiki makumi matanhatu, varwi vakakuvara, uye vakuru. Pakazara, vane zvikamu zana nemakumi maviri enharaunda munzvimbo dzinopfuura makumi mana kumatunhu ese United States. Vanopa mitambo inopfuura makumi mashanu iyo vanhu vazhinji vasingakwanise kufunga nezvayo 60,000. Ndiko kusarudza kukuru uko vanhu vakaremara vanogona kusarudza kubva. Unogona kuona vhidhiyo ipfupi inotsanangura kukanganisa kwechiitiko nevatambi vega. pano ndiko kubatana. Zvakare, chinongedzo kune iyo chaiyo webhusaiti ichasanganisirwa pano kana uchida kuverenga rumwe ruzivo rwakadzama.
Adaptive mitambo zvakagadzirwa kune vanhu vakaremara. Izvo zvakagadzirirwa kubvumira shanduko idzo dzinodiwa kuti vanhu vatore chikamu. Mazhinji emitambo anoshandisa maitiro echirongwa anoitika kuisa vatambi nematambudziko epanyama pane imwe nhandare yekutamba nemumwe. Iwo akajairika ndeaya, yekupfura museve, basketball, boccia, canoeing, cross-country, curling, cycling, downhill skiing, equestrian, hove, gorofu, ruoko kuchovha, kukwira makomo, kuvhima, kayaking, martial arts, mugomo kuchovha, paddling, rafting, kukwira dombo, kumhanya, kufamba nechikepe, scuba, skateboarding, sled hockey, snowboarding, snowshoeing, simba rekudzidzisa, kufambisa, kushambira, tai chi, tenisi, triathlon, volleyball, kusvetuka kwemvura, wiricheya Mujaho, uye yoga. Kana iwe uchida kudzidza rumwe ruzivo pane wega mutambo wega chinongedzo chichava pano. Mimwe yemitambo iyo inopihwa kuburikidza nevakawanda havana kuziva kuti yaivapo zvinoita kuti zvinyanye kunakidza! Ita shuwa yekuchengeta kusvika pari zvino pawebhusaiti yavo kuti uwane kwavachaenda kunogara kurukova kana chiitiko ichiitika uye iwe unogona kuona ese akasiyana mitambo achibuda. Dr. Abu B. Yilla anoita hurukuro yeTEDx nezve izvi uye zvinokupa iwe nzwisiso yakanaka kwazvo mumaonero ake uye chinongedzo chichava pano.
Paunoshanyira webhusaiti yavanayo, vanokupa sarudzo yekutsvaga kushandisa chaunofarira chichaguma nenzvimbo ichaitirwa mutambo uyu. Semuenzaniso, iwe hausi kuzowana snowboarding muLos Angeles California pachinzvimbo iwe unozowana iri mukana wekuisa muBIg Bear Califnoria kwavanotova nechando, kwete seLA uko kunenge kusinganaye mvura. Iyo webhusaiti inoratidza kunyange mepu kubatsira mushandisi kuziva chaiko nzvimbo kana vachida. Kana iwe uchida kuona kana mutambo urikuitika padyo nenzvimbo yako unogona kusarudza iyo stat yaunogara mairi kana ikaonekwa pachiratidziri kana iwe ukabaya pane yekuwedzera icon uye mushure meizvozvo, iwe unoona akati wandei emaguta akadonha pasi. Dzvanya kuguta raunoda uye rinokutungamira kune peji reruzivo pane zvemitambo zvichaitika.
Kufinhwa Paunenge Uri Wiricheya